ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » Little ကချစ်ခင်စုံမက်ဖော်ပြပေးအဘယ်သူမိန်းကလေးတစ်ယောက်ချိန်းတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 19 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သင်သည်အနည်းငယ်ချစ်ခင်တင်ပြသူမိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့နေကြတယ်ဆိုရင်သုတ်ပဝါအတွက်ပစ်ခြင်းငှါစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ. သင်အမြဲထိုကဲ့သို့သောဖက်အဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုကိုစတင်လုပ်ဆောင်ရန်သူတယောက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,, cuddling, သို့မဟုတ်နမ်း. သူမချစ်ခင်တွယ်တာသင့်ရဲ့ display တွေမှလက်ခံနေစဉ်အခါ, သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်ဤအကြောင်းမူအယာများမသက်မသာအစပြုခံရဖို့ဟန်. သင်သည်သင်၏ရက်စွဲမှဤကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးသင်နှောင့်ရှက်တတ်ပါဆိုရင်, သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအတွက်မလိုအပ်တဲ့တင်းမာမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ယခုအရေးယူ.
သင့်ရဲ့ချစ်သူကသင့်စိတ်ကိုမဖတ်နိုင်တယ်နှင့်သူမ၏အပြုအမူကိုသင်အကျိုးသက်ရောက်ဘယ်လိုမျှမစိတ်ကူးရှိစေခြင်းငှါနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ဆက်ဆံရေးကကျွမ်းကျင်သူ, ဒေါက်တာ. ကရင် Sherman ကသင်မည်သို့ခံစားရသည်သင်၏ရည်းစားပြောပြရန်အရေးကြီးကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြ. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, သူမ၏ unaffectionate အပြုအမူသင်တို့ပယ်ခံစားနေရတယ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်, သူမ၏မှဝေးကွာသော, စိတ်ပျက်နေ, သို့မဟုတ်ပင်မလိုလားအပ်သော. ထိုသို့မည်သို့ပင်, သူမ၏အပြုအမူသင်ထိခိုက်နိုင်ဘယ်လောက်ကြီးလေးတဲ့ဆွေးနွေးမှုနှင့်အသံများအတွက်ဘေးဖယ်သူမ၏ဆွဲယူ.
သင်အနှောက်အယှက်မပေးဘူး, အဘယ်သို့သောအားအသိပညာများကိုဆောင်ခဲ့ပါပြီပြီးနောက်, ဒါကြောင့်နက်ရ​​ှိုင်းတဲ့တွင်းတူးဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ရည်းစားရဲ့အမူအကျင့်များအမြစ်အကြောင်းမရှိခွဲခြားသတ်မှတ်ကိုကူညီမေးခွန်းများကိုမေးပါ. သူမသည်သူမ၏ရက်စွဲများချစ်ခင်တွေအများကြီးမလိုအပ်ခဲ့သည့်အတွက်ယခင်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ရပြီစေခြင်းငှါ. ထို့အပြင်, သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုဆဲမျှမျှတတအသစ်ဖြစ်၏လျှင်, သူမသည်သင်နှင့်ဆက်ဆံရေး၏တောင်းဆိုချက်များအားတက်နွေးဖို့ပိုအချိန်လိုပါလိမ့်မယ်. သင်၏နှစ်ဦးချစ်ခင်စုံမက်၏သူမ၏မရှိခြင်းအဘို့အဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းအတိအကျတခုကိုဖော်ထုတ်ပြီးပြီ, သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ရှိသည်နိုင်ဦးနှောက်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်နည်းလမ်းများ.
သတိရ, သင်တို့ကိုသဘာဝကျကျရလာစေတဲ့နည်းနဲ့သင့်ရဲ့ချစ်သူမှခံစားချက်များကိုဖော်ပြသင့်ပါသည်, သူမကသူတို့ကိုအပြန်အလှန်ပါဘူးလျှင်ပင်. သူ့ရဲ့ဆောင်းပါး "Highly ချစ်စနိုးလူတွေက၏ 10 ကြန်အင်လက္ခဏာများ" တွင်, ဒေါက်တာ. Kory Floyd ထိုကဲ့သို့သောပိုမိုမြင့်မား Self-လေးစားရှိခြင်းအဖြစ်ချစ်ခင်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်၏အကျိုးခံစားခွင့်များစွာကို lists, နွေးထွေးမှုနည်းကြောက်လ, နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကနေ သာ. ကြီးကြံ့ကြံ့ခံ. ထို့အပြင်, သုတေသီတွေကအန္ဒြေ Gulledge, Michelle Gulledge, နှင့်ရောဘတ် Stahmann ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချစ်ခင်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုတိုးပွါးကြောင်းသရုပ်ပြ. ချစ်ခင်စုံမက်သင့်ရဲ့ရည်းစားမရှိခြင်း၏ကြားမှ, ချစ်ခင်စုံမက်ကိုပြသဖို့ပဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကားပွင့်လင်းသင်တို့သည်ဤအပြုသဘောဆောင်သည့်ရလဒ်များအပေါ်တိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုနှင့်အနာဂတ်အတွက်ဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီ.
သင်တို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါကျွန်တော့်ပွိုင့်ဖို့လာနိုင်ပါသည်, သင့်ရဲ့ရည်းစားရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပေမယ့်, သင်ဆက်ဆံရေးတွင်နေဆဲစိတ်ကျေနပ်မှုမရဘူး. ဒေါက်တာ. Sherman မည်သည့်ဆက်ဆံရေးတွင်အရေးပါသည့်အချက်တစ်ချက်အချင်းချင်းကွဲပြားခြားနားမှုကိုလက်ခံတတ်ရန်သင်ယူခြင်းကြောင်းပြောပါတယ်. ချစ်ခင်စုံမက်သင့်ရဲ့ရည်းစားမရှိခြင်းသင်အနှောက်အယှက်ဆက်လက်သင်ရှာတွေ့ပါ, ကလှိုက်လှဲပျူငှာစွာဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ရန်နှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာအတွက်သင့်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမည်.